IAd mmechi, cobalt batrị asịrị, okwu site Donald opi na ọtụtụ ndị ọzọ. Kacha mma n'izu na m si Mac | Esi m mac
IAd mmechi, cobalt batrị asịrị, okwu nke Donald Trump na ọtụtụ ndị ọzọ. Best nke izu na m si Mac
Otu ụbọchị Sọnde anyị nọ na Soy de Mac iji chee gị mkpokọta nke ị ga - enwe ike ịgụ isiokwu ndị ama ama nke anyị nyere na blọọgụ anyị n’izu gara aga. Eziokwu bụ na izu ọ bụla gafere na-abụ otu izu ga-erughi ihe ngosi ngwaahịa ọzọ ga-abata, nke nwere ike ịbụ na Machị.
Ihe doro anya bụ na n'agbanyeghị eziokwu ahụ na ọ nweghị ngwaahịa ọhụrụ ewepụtara, ụlọ ọrụ teknụzụ ndị na-eduga na-adịkarị mgbe niile na ọ na-egosi etu nchịkọta a si dị.
Anyị na-amalite site n'ịkatọ ndị bọmbụ nke tara ahụhụ n’izu a n’isi ụlọ ọrụ Apple na Cork na Ireland. Oti mkpu mere na ogige maka egwu bọmbụ. Ozugbo ahụ, ndị ọrụ nche, ndị uwe ojii nke Republic of Ireland na ndị ha na-atụ bọmbụ ha mere ahaziri ebe ahụ. ịchọta ihe ọ bụla na-enyo enyo na / ma ọ bụ arịa.
Apple mechiri ya iAd ad n'elu ikpo okwu ọ bụkwa na n'agbanyeghị onye ọ dị arọ, Google bu eze ajuju nke mgbasa ozi intanetiN'ezie, ọ bụ otu n'ime isi mmalite ego ya, na mgbakwunye na eziokwu AdSense na nyiwe AdWords ya bụ ndị ọrụ niile chọrọ iji kpọsaa na orntanetị ma ọ bụ nweta uru site na ịtinye mgbasa ozi na ibe weebụ ha.
O yiri ka n'oge na-adịghị anya Apple ga-agbanwe ọrụ redio dị na iTunes, iTunes Radio. Nke a bụ onye ọzọ otu n'ime ndị ozi ọma na ụfọdụ ndị ọrụ na-ama na-atụ anya ozugbo gụgharia music ọrụ, Apple Music na oru, ugbu a mgbe oge nke ọrụ a na-arụ ọrụ maka free, ọ ga-aghọ a na-akwụ ụgwọ ọrụ ike n'ime Apple Music.
Onye ndoro ndoro ochichi nke USA, Donald opi, nyere n'oge na-adịbeghị anya a rally na Virginia Liberty University n'oge nke a o kwuru okwu banyere ụdịrị ụdị okwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ dịlarị dịka mbata na ọpụpụ na echiche ya karịa echiche mgbanwe. Otú ọ dị, n'oge a, Trump kwukwara banyere Apple n'okwu ya mgbe ọ na-ekwu maka otu esi eweghachite ọrụ na United States mgbe a bịara n'ihe ndị a rụpụtara, na-achụpụ ụlọ ọrụ na mba ndị dịka China.
N'okwu onye nde na onye ndoro-ndoro ochichi, "anyị ga-enwerịrị akụrụngwa ha na ngwa ndị ọzọ n'ime obodo a."
Apple na-eche ihu ọjọọ ọhụrụ metụtara mmalite nke akụrụngwa nke ndị China ji eme batrị nke ngwaọrụ ha. Amnesty International akatọwo na cobalt nke ejiri batrị nke ngwaahịa Apple na ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị elu na teknụzụ si na oru nke umuaka umuaka na Congo.
Okwu banyere nchedo Apple Ma, na nkenke, nke ndị na-emepụta ekwentị mkpanaka ọ na-ada ụda na ọ bụ n'izu ahụ n'izu anyị maara data ọhụrụ echere maka ụlọ ọrụ ndị a nwere ịhapụ ụzọ azụ na sistemụ nke ngwaọrụ mkpanaka ha ka Ọ bụrụ na onye ọka ikpe nye ya iwu, enwere ike ịnweta ozi ahụ na-enweghị nkwenye mbụ nke onye nwe ngwaọrụ ahụ.
Apple Watch Hermès dị ugbu a maka ire ere site na ebe nrụọrụ weebụ Apple. A na-atụ anya na ọ ga-agbasa na mba ndị ọzọ na izu ndị na-abịanụ.
Y’oburu n’acho ihe n’ile gi ma ichoro uzo na ejiji, odi nma ebe obu n’izu a ị gha azuta ihe nlere Apple Watch si na nchịkọta Hermés site na ntanetị na-enweghị ịga na Applelọ Ahịa Apple, nke a pụtara na dịka ọ dị n'ụdị ndị ọzọ, anyị nwere ike mee ụlọ ahịa ahụ n'ụzọ dị jụụ n'ụlọ ma ọ bụrụ na anyị enweghị ohere ahụ ịbịaru ịnwale ihe nlereanya ahụ karịsịa.
Otu afọ ọzọ, Apple ga-eme ememe n'oge ọnwa nke June, ma ọ dịkarịa ala nke ahụ bụ otú ọ na-eme kemgbe 2007, WWDC, ogbako ogbako n'ime nke ebuputara uzo ohuru nke OS X na iOS na nke ụmụ okorobịa si Cupertino, ga-enye nhụchalụ nke isi akwụkwọ akụkọ ndị ọhụrụ ndị a ga-eweta anyị n'oge mgbụsị akwụkwọ, ụbọchị ole na ole tupu mbata nke iPhone ọhụrụ ahụ na ahịa, dị ka ọ dị na mbụ, nke mere na n'ụzọ dị otú a, ụdị ọhụrụ ndị a, ụdị iOS kachasị ọhụrụ dị na ahịa na-abịa n'ahịa ma ọ bụghị na nsụgharị ndị gara aga.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » IAd mmechi, cobalt batrị asịrị, okwu nke Donald Trump na ọtụtụ ndị ọzọ. Best nke izu na m si Mac
Apple Watch Hermès dị ugbu a na Storelọ Ahịa Ahịa Online
Etu esi etinye ma wepu ngwa na nchekwa site na Dock na iPhone ma ọ bụ iPad gị